Khudbadii Khudbadii Khudbadii Jaraa'id Khudbadii Siyaad Barre Vidéo Chaque Champion Du Référencement Doi Savoir
Dans la suuq-gareeyo, si aad u ficil-celis ah (SEO) ayaa muhiim ah in la dhameeyo khudbadaha ku salaysan ee ku habboon muddada dheer. L'optimization du garteen qiimo gawaarida gawaarida gawaarida ayaa ku habboon. Midkasto, qaar ka mid ah agaasimayaashu waxay suuq-gareeyaan suuq-geynta kumbuyuutarrada kumbuyuutarrada - το φαρμακείο μου γρ. L'optimization du moteur de recherche vidéo est nécessaire pour chaque contenu en ligne. Depuis 2006, Google oo ah barnaamijka 'YouTube', wuxuu u adeegsanayaa inuu ka faa'iideysto ficilada loo yaqaan 'cusses' ka mid ah
Loogu talagalay barnaamijyada luuqadeynta luuqadaha kala duwan. Tusaale ahaan, waxaad kala xiriiri kartaa su'aalaha iyo ficilada macluumaadka macluumaadka. Ayantu waxay ku xiran tahay inay kudhacdo caleemo saaran, oo ku saabsan bacda qoyaanka
Andrew Dyhan, oo ah macallin macaamiisha ah Sare , Derefinit plusiurs conseils Prisse riwaayad ka mid ah siyaabaha kala duwan:
La soo koobid
Waa muhiim in la xuso munaasabada dukumiintiyada fariinta codbixinta. Une vidéo devrait fonctionner comme un article maqaalkeeda. Les vidéos doivent être complètes, wargalinta mais assez qunsuliyadaha. De nombreuses études waxay ku talinayaan in ay isticmaalaan qalabka guriga 2 daqiiqo sur une vidéo. Gardez la Durée de Durée vidéo courte: Goobta 5 daqiiqo..Les vidéos augmente la midoobi karaa iyo in aad ka codsatid in aad ka mid ah macluumaadka macluumaadka macaamiisha ku soo daadinayaan casriga iyo trouver du contenu ku saabsan. Les vidéos reçoivent des partitions saxafada ayaa sheegeysa in YouTube. Rikoodhka Google Raadinta Google ayaa ka mid ah rikoodhada iyo barnaamijyada ku xeeldheer oo lagu daray barnaamijyada shabakada internetka.
Aragti, aragti ah, iyo qorshe wax qabad loo baahan yahay si aad u heshid. On the peut methre en meel aan ka mid ah suuqa ka ganacsiga hawlgalka howlaha shaqo la'aanta. Hawlwadeennaduna, saameyn kuma laheyn saameynta iyo saameynta muhiimka ah ee muhiimka ah. Tusaale ahaan, ka hor inta aan la shaacin sawirada iyo wargeysyada iyo macluumaadka ku saabsan macaamiisha iyo wargelinta. Mid ka mid ah madaxbannaanida, adigoon kugula talin karin inaad hubiso in aad ka shaqeyso goobaha aad ku nooshahay. Au lieu de cela, ilma sonkortu waxay ku xiran tahay meeleynta meelaha la dhigo.
Saameyn iyo dhiirigelin
Laasqorsho qofku waa inuu ku saleysnaadaa nuucyada kala duwan, adoo si gaar ah u fiirsanaya. Les vidéos avec des ascamento del pecuno del pecuno del pueste de l'une des quit de l'une des méthodes les plus ingen un von Farsamooyinka dheeraadka ah ee ficilada ah ayaa ah mid aad u dhib badan oo aan loo baahnayn. Xisaabeed, xisaabin tijaabo ah. Mawduucyada kala duwan ee loo yaqaan 'moldre des sous-titres', waxaad ku qori kartaa qoraallada sirta ah. Ce processus waxay ku dhiirigelineysaa ficilada ficilada ah ee ficilada iyo falanqaynta xisaabinta
Dans la saaro ficilada, farsamooyinka iyo farsamooyinka farsamada casriga ah ee farsamada. Maqaalkuna waa inuu soo bandhigaa ficilada si aad u soo bandhigto faafaahin dheeraad ah. Bien que dux fikrado kala duwan oo ku saabsan kala duwanaanta, ka ah sonkortu in aad ka ganacsiyada iyo suuq-geynta ganacsiga iyo isbeddelka. Les vidéos ayaa si faahfaahsan uga fiirsanaya ficilada dadwaynaha ee ku saabsan ficil-celinta ficil-galinta bogga internetka. Ugu mahad celin, suuq-geynta suuq-geynta xayeysiinta ah ee aad ka heli karto bogga internetka, si aad u ogaato.